Soomaaliya oo doorka ugu weyn ku leh finalka CECAFA
Waxaa gellinka dambe ee maanta lagu soo gabogabeyn doonnaa dalka Tanzania, tartanka kooxaha bariga iyo bartamaha Afrika, oo bishii hore halkaasi ka furmay, waxaana kasoo qeyb galo kooxaha dalalka bariga iyo bartamaha kuwaas oon kusoo guuleysto horyaallada dalalkooda.
Tartanka kubadda Cagta Degmooyinka oo Muqdisho ka Furmay iyo Yaaqshiid oo Guul weyn ku bilowday.
Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay laguna daahfurayay tartanka kubbadda cagta degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa maanta ka dhacday garoonka Banaadir, waxaana kasoo qeyb galay masuuliyiin ka socotay Gobolka Banaadir , guddiga olombikada Soomaaliyeed, Xiriirka kubada cagta, madaxda Isbortiga gobolka , madaxda degmooyinka, ciyartoyda iyo taageraayasha 17-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Kooxdii Soomaaliyeed oo kaalinta 3aad ka gashay koobka Norway Cup. (Sawiro)
Cayaartoy hore iyo martisharaf sport oo xalay lagu soo dhaweeyey London. Kulan lagu soo dhawaynayey cayaaryahanadii hore ee naadiyadii Badda iyo Betroolka Xamsa SAciid Xamsa iyo Xasan Maxamed Maxamuud (Xasan Yare) iyo martisharaf kale oo ay ka mid ahaayeen xoghayihiii hore ee XSKL Maxamed Yaanyo iyo C/Rashiid Ciilmooge ayaa xalay waxa uu ka dhacay galbeedka magaalada London. Read More...
Kooxda Waryaa FC oo wacdaro ka dhigaysa koobka Norway Cup 2015. Kooxda Waryaa FC oo ah koox Soomaaliyeed oo laga soo xulay gobolada dalka soomaaliya iyo dalalka Yurub qaarkood da'dooduna ka yar tahay 14 jir kana qaybgalaysa tartanka caalamiga ah ee Norway cup ayaa galabta soo gaaray Semi-Finalka tartankan.
MO Farah oo ku guulaystay orodka 3000m ee cayaaraha sanadguurada. Orodyahanka caan baxay ee Mo Farah ayaa mar kale garoonkii uu ku qaaday biladdihii dahabka ahaa ee tartamadii Olimbikada Adduunka ee Olympic Stadium ku hantiyey bilad kale oo qaali ah ka dib markii uu xalay ku guulaystay kaalinta koowaad ee orodka 3000m, cayaaraha sanadguurada ee ka socda London (Aniversary Games).
Orodyahanad uu tababaro macalin Jaamac Karaaciin oo jabisay rikoor caalami ah. Waxaa markale Ciyaaraha oroddada caalamka kaga dayaamiyey Ciyaartoyga Genzeba Dibaba ee uu Tababarro Jama Aden oo ah tababare si weyn looga qaddariyo, ama looga dambeeyo Caalamka ka ib markii ay 24 jirkan ay jebisay rikoodhkii u yaalay orodka masaafada 1500m/meter; kaas oo ahaa mid aan loo dhawaan jirin, kuna cusboonaysiisay 3 miridh 50.07 oo ilbidhisqsi 3:50.07.
Orodyahan ka soo jeeda dalkeena oo ku guulaystay 10000m ee cayaaraha PAN America 2015.
Orodyahan Maxamed Axmed oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya balse matalaya dalka uu degan yahay ee Canada ayaa ku guulaystay biladda dahabka ee orodka dheer ee 10000m cayaaraha Pan Am ee ka socda magaalada Toronto ee dalka Canada.
Cayaarihii xagaaga ee dalka Sweden oo shalay ka furmay Stockholm. Ururka dhaqanka iyo cayaaraha ee dalka Sweden (SEUKI) ayaa shalay si rasmi ah magaalada Stockholm ee dalkaasi ka furay tartankii caanka ahaa ee xagaaga ku dhexmari jiray kooxaha jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha.
Page 9 of 16First Previous 4 5 6 7 8  10 11 12 13 Next Last Search Articles...